Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara mmiri mmiri ma ọ bụ okirikiri mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị maara ihe mmiri ozuzo bụ, a makwaara dị ka hydrological okirikiri. Ọ bụ ihe na-aga n'ihu na usoro ndụ mmiri mmiri nke mmiri nwere gburugburu ụwa anyị. Site na mbido ruo na ngwụcha nke okirikiri ahụ, mmiri nwere ike ịgafe steeti atọ: mmiri mmiri, siri ike na gas. Usoro nke otu ntapụ mmiri si amalite okirikiri ma kwụsị ya nwere ike ịdị site na sekọnd ruo nkeji ruo ọtụtụ nde afọ.
You chọrọ ịma usoro mmiri mmiri dị omimi? N’isiokwu a ị ga-amụta ihe niile gbasara ya.
1 Otú mmiri ozuzo si arụ ọrụ
2 Usoro ndị na-emetụta okirikiri mmiri
3 Oge ikwu nke okirikiri mmiri
4 Mkpa okirikiri mmiri maka ndụ
Otú mmiri ozuzo si arụ ọrụ
Mmiri nwere nguzozi n’uwa. A na-enwekarị mmiri hà otu mmiri, mana n'ọtụtụ ebe na ọnọdụ dị iche iche. Ke ofụri ofụri, ndị hydrological itule bụ mgbe niile, ọ bụ ezie na mmiri na ụmụ irighiri ihe nwere ike igbasa nnọọ ngwa ngwa.
Anyanwụ na-amalite iduzi ma bugharịa usoro mmiri kpoo mmiri nke oke osimiri na oke osimiri oku. Mgbe mmiri na-amịkọrọ ya, ọ na-aghọ urukpuru. N'oge a mmiri dị na gas. Ozugbo ọnọdụ dị mma dị, ọ na-ewere ọnọdụ ọdịda. Dabere na ikuku ikuku, mmiri nwere ike ịbụ n'ụdị siri ike (snow ma ọ bụ akụ mmiri mmiri) ma ọ bụ n'ụdị mmiri mmiri (raindrops).
Ozugbo mmiri ahụ dakwasịrị n’ala, enwere ike ịchekwa ya n’ụdị mmiri ala, mepụta puddle, marshes, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri ma ọ bụ sonye na mmiri iyi dị n’elu mmiri dị ka osimiri, iyi, wdg. Ọ bụrụ na nke a emee, a na-eduga mmiri ahụ n'oké osimiri ọzọ ebe ọ ga-apụ ọzọ site na radieshon nke anyanwụ ruo mgbe ọ ga-aghọ igwe ojii. Nke a bụ otú mmiri mmiri si emechi.
Usoro ndị na-emetụta okirikiri mmiri
Enwere ọtụtụ usoro na-etinye aka na usoro mmiri a yana site na ha mmiri a na-edebe na-aga n'ihu. Dịka ọmụmaatụ, enwere usoro nke mmiri na-esi pụọ ma ọ gaghị abụ kpọmkwem evaporation nke mmiri site n'oké osimiri n'ihi radieshon nke anyanwụ.
Mmiri na-arị elu bụkwa ihe sitere na mmiri ndapụ Ọ na-abịa site na osisi abụọ n'oge usoro photosynthesis na evaporation site na ala.
Mgbe anwụrụ ọkụ si n'ikuku bilie, ikuku oyi na-eme ka ọ gbakọta ma ghọọ igwe ojii gburugburu ụwa. Mkpụrụ mmiri dị n'ime igwe ojii na-adaba ibe ha na-etolite ibu tụlee. Mkpụrụ mmiri ahụ chọrọ isi ihe odide hygroscopic iji sonyere ha ma mepụta nnukwu ụmụ irighiri mmiri. Isi odide a nwere ike ịbụ nsị aja, dịka ọmụmaatụ.
Na nchịkọta na-aga n'ihu na nchịkọta nke ụmụ irighiri mmiri, ha na-ebuwanye ibu ma dị arọ ruo mgbe ha dara n'okpuru ibu nke ha. Ọnọdụ ndị a dabere na clouddị igwe ojii nke ahụ dị n'oge nke ọ bụla na ọnọdụ ikuku. Dịka anyị kwuru na mbụ, usoro otu mmiri mmiri (n'agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla ọ nọ) nwere ike iwe were ọtụtụ nde afọ iji mezue okirikiri bụ n'ihi ihe ndị a.
Oge ikwu nke okirikiri mmiri
Mgbe otu ntapụ mmiri si n'urukpuru dapụta n'ụdị siri ike dịka snow ma ọ bụ akpụrụ mmiri, ọ ga-agbakọ na okpu pola na glaciers ugwu na ghara ikusi ọzọ ma gaa site na mmiri siri ike na mmiri na ọtụtụ nde afọ. Mmiri a nwere ike ịchekwa otu a ruo ọtụtụ nde afọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ agbanweghị. N’ihi ya, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike wepụ ihe ọmụma buru ibu site n’okpokoro ndị dị n’akụkụ pola site n’iji ihe kpụkọrọ akpụkọ mee ihe.
Ọ bụrụ na ihu igwe dị ọkụ karị, akpụrụ mmiri na-agbaze ma gbazee mgbe mmiri ruru na ọnọdụ okpomọkụ na-ebili. Mmiri gbazee na-aga n’ala ma na-enye ndagwurugwu na osimiri nri. Imirikiti mmiri ozuzo na-agafe ụwa niile na-ada n'oké osimiri. Ọ bụrụ na ọ mee otú ahụ na ala, ọ nwere ike ịghọ iyi dị n'elu ala, ma ọ bụ enwere ike ịchekwa ya n'okpuru ala dị ka mmiri mmiri ma na-enye aquifers. N'ezie, enwere mmiri karia nke na-achikota site na usoro ntinye kariri nke a na-aga n’osimiri na n’ọdọ mmiri.
Ọ bụrụ na mmiri ahụ na-anọgide na-echekwa n’ime ala, oge ọ na-ewe ruo mgbe ọ rịgoro n’elu ọzọ site na mmịpụta nke ụmụ mmadụ ma ọ bụ redirection gaa n’ọdọ mmiri ọzọ wee pụọ ọzọ ruo ọtụtụ narị afọ.
Mgbe mmiri batara, ọ kwesịrị ịchekwa ya n'ime ala iji mejupụta aquifers. Storeslọ mmiri ndị a dị n’ime ala dị ezigbo mkpa maka ọnụọgụ mmadụ ebe ọ bụ naanị ha na-enye ọtụtụ obodo. Othersfọdụ ndị ọzọ, Otú ọ dị, nwere ike ịnọ nso na mbara ụwa wee pụta, na-ejedebe dị ka mmiri dị elu na nke oké osimiri.
Mkpa okirikiri mmiri maka ndụ
Mmiri mmiri dị ezigbo mkpa maka ndụ n'ụwa. Ekele ya, ndụ nwere ike ịba ụba nyere ihe onwunwe ya. Ọ na - eme ka ogige dị iche iche meghachi omume n’ụzọ na - aga n’ihu na mbara ụwa. Dị ka eleghị anya ị maraworị, ahụ mmadụ mejupụtara 60-70% mmiri, ya mere na-enweghị ya anyị enweghị ike ịdị ndụ.
Ọ dịkwa oké mkpa maka osisi ka photosynthesize na-eku ume. Iji dozie pH nke mmiri na ọrụ ndị dị mkpa nke enzymes, mmiri bụ ihe dị mkpa. Ọzọkwa, dịka ị pụrụ ịhụ na ntopute nke ahịhịa na anụmanụ, ụdị ndụ izizi mbụ malitere na mmiri. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụ niile bi na mmiri na e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mammals, amphibians na ihe nākpu akpu na ya. Osisi ụfọdụ dị ka algae na-eto nke ọma na gburugburu mmiri, ma ọ bụ mmiri dị mma ma ọ bụ nke nnu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mmiri bụ ihe kachasị mkpa na mbara ụwa anyị na ekele maka ya anyị nwere ike ịnwe ndụ dịka anyị si mara ya taa. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịmara otu esi enwe ekele maka akụ a bara uru mana nke, ọ dị mwute, na-adịwanye ụkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmiri mmiri ma ọ bụ okirikiri mmiri